8 Keystone Tsika Dzinozogadzira Yakanaka Shanduko MuHupenyu Hwako - Blog
8 Keystone Tsika Dzinozogadzira Yakanaka Shanduko MuHupenyu Hwako
Iwe unogona kunge wakanzwa yekuzvibatsira-wega uye nehupamhi gurus achitaura nezvazvo “Miitiro inokosha” pasina kunyatsotsanangura izvo zvavari. Ngatirongei izvozvo.
A Keystone Habit itsika yezuva nezuva - yaunoita nekushingairira uye nekujaira kuita zvekuti inova yechipiri hunhu, uyezve inoita sechinhu chinokurudzira zvimwe zvinhu zvakanaka muhupenyu hwako.
Funga nezve mamongi kuimba yemamongi: vane seti yetsika uye tsika dzavanoita zuva rega rega, kubva kubhero rekutanga rinovadaidza kumunamato mambakwedza, kugeza maoko pamberi pekudya kwese, minamato panguva dzakati dzezuva, etc.
Avo vedu vasingararame hupenyu hwemamongi (hunonyatsogadzirisa zvinoitwa munenge maminitsi ese ezuva) tinogona kuzviwana tiri mumanyonganiso emhando yepamusoro.
Heano mashoma maitiro (kana kuvadaidza tsika, kana iwe uchida) izvo zvinogona kuunza pfungwa yekudzikama kuhupenyu hwedu, uye zvinogona kuva masimba shanduko yakanaka kwazvo .
1.Gadza Nguva Yekurara Uye Yekumutsa Nguva
Inofungidzirwa kuti munhu mumwe muvatatu vakuru ndiye zvinogara zvichirara , kunyanya kuMadokero, asi izvo hazvisi zvakawanda zvekushamisika, handizvo here? Iwe kangani iwe unzwe kupera simba zvachose , maringe nekunzwa kuzorora zvakanaka uye kungwarira?
Kuneta kusingaperi kunokanganisa zvese zvega zvehupenyu hwedu, kubva pahupenyu hwedu hwakanaka kusvika kumatangiro atinoita muhukama hwedu.
Maitiro edu e circadian anogona kukanganiswa nekushanda kusvika pakati pehusiku, zvadaro masisitimu edu ekugaya anokandwa nekugara pakofi nekutora.
Nekudaro, isu taneta uye takatsamwa uye takagumbuka mudumbu, izvo zvinogona kukonzeresa kuti tinyengere nhengo dzemhuri yedu, tichiita zvisirizvo pabasa, tichitambura nekushomeka kwekudya zvinovaka muviri kana nyaya dzehuremu ... rondedzero inongopfuurira.
Kurara kwehusiku hwakasimba ndiyo hwaro hwakakwana hwehupenyu hune hutano, hune rugare.
Bvisa foni yako kweinenge awa usati waronga nguva yekurara, uye usatarise chero skrini paunenge uchidzikira kumubhedha.
Shamba, ita yoga zvinyoro nyoro, verenga, kana kutomboita crossword mapuzzle mumubhedha kusvikira iwe watanga kumira.
Seta alarm yekumutsa iwe (zvinyoro nyoro) maawa manomwe kana masere pasi mutsetse, uye edza kunamatira kune iyo purogiramu mazuva ese evhiki. Muviri wako uchakurumidza kugadzikana kuita mutinhimira uye zvimwe zvakasiyana zvinowira munzvimbo semhedzisiro.
2. Gadzira Mubhedha Wako
Zvinogona kutaridzika kunge zvisina basa, asi idiki, inokurumidza tsika iyo inoisa muenzaniso wegadziriro uye nehupfumi hwezuva racho.
Zvakare, pane subconscious level , inogadzirira danho rekuti zuva ribude: inovhara chitsauko chezuva rapfuura, ichisiya chisina chinhu nhasi.
Iyo zvakare ine yakawedzera bhenefiti yekuva nemubhedha wako wakagadzirira kuti iwe unokambaira mukati mehusiku.
Bonus inonongedza kana ichichengetedzawo mhuka dzinovaraidza kana vana kubva pakusiya kushamisika mumashiti ako kuti iwe uwane gare gare.
3. Ronga Kugara Uchiekisesaiza
Iwe haufanire kunyura muchirongwa chakakomba chemuchinjikwa-chakakodzera kana kusarudza kuita matatu ezuva husiku: kutaura zvazviri, mukana wevanhu vazhinji vanoteedzana neimwe yeiyo ishoma, uye izvo zvinongotungamira kune kuzvishora . Hapana chikonzero cheizvozvo.
Pane kudaro, tarisa zvakatendeseka pane rako rebasa revhiki nevhiki uye nemitoro, uye ronga kurovedza muviri kwaunofarira kana uchikwanisa kuzviita.
Sezvineiwo, hafu yeawa kusvika paawa yekurovedza muviri zuva rega rega ingave yakanaka, asi isu tinoita zvese zvatinogona nezvatinofanira kushanda nazvo, handiti? Iva munyoro newe.
Kufamba kunoshamisa, sekushambira, kana paine dziva padyo newe. Exercise iyo inosanganisa kufungisisa nekufamba senge iyo yoga kana tai chi inoshamisa, uye inogona kuchinjiswa kune yako nhanho yeanokwanisa-akasimba-ness.
Ungada here kutamba? Edza Zumba, kana kutamba mudumbu, kana kunyange ballet kune vanotanga.
Kana uchikwanisa, ronga chikamu kutanga kwesvondo kukaka-kutanga simba rako, imwe pakati pevhiki kuti urambe uchienda, uye imwezve yakareba kupera kwevhiki kana uine imwe nguva.
Iwe uchakurumidza kuona kukura kwaunonzwa mushure mekufamba zvishoma, uye kuva nehurongwa hwenguva dzose kunogadzira iyo pfungwa yehythm uye kuvimbika isu tese tinokoshesa muhupenyu hwedu.
4. Rasa Uye Tsiva
Sarudza zuva rimwe chete pasvondo, kana rimwewo svondo, kana kunyangwe kamwe chete pamwedzi, kwaunorasa chinhu chausingade kana chaunoda.
Izvi zvinokubatsira kudzikisira marara (kwete zvekare 'junk drawer') uye zvinogona kukupa iwe mukana wekutsiva zvinhu zvaunonzwa 'meh' nezve nezvinhu zvaunokoshesa zvechokwadi (kana kungogumbatira. minimalist kurarama ).
Sekurudziro, dhonza kubva papfungwa yaWilliam Morris:
Usave nechinhu mudzimba dzako chausingazive kuti chinobatsira, kana unotenda kuti chakanaka.
Unoda kubvisa mapurasitiki mukicheni yako? Chidimbu nechidimbu, chinja midziyo yepurasitiki nemidziyo yekuchengetera neiyo yakagadzirwa nematanda, girazi, simbi, uye zvedongo.
Vengai zvishongedzo pamadziro ako? Vachinjanise nechimwe chinhu chitsva kusvikira iwe wakakomberedzwa nerunako runokukurudzira.
Bvisa zvinhu kubva muhupenyu hwako izvo zviri kungo wedzera kuwanda pasina kuwedzera kukosha, kana izvo zvausingade zvechokwadi uye nekukoshesa.
Maitiro Ekuitisa Yega Yega SWOT Ongororo YeYako Yese Hupenyu
Zvidzidzo gumi zvauchadzidza chete nekupfuura kupfuura nzvimbo yako yekunyaradza
12 Ipfupi TED Hurukuro Dzichachinja Hupenyu Hwako Nokusingaperi
5. Gadzira Zvekugovana Zvekudya Zvekudyidzana Uye Mhuri / Shamwari Tsika
Kuva nechikafu chakasarudzika kana tsika yemhuri yekutarisira nguva dzose itsvarakadenga tsika yekuvandudza.
Vamwe vanhu vanoungana pamwe nehama pakudya kukuru kwemhuri nemusi weSvondo manheru, nepo vamwe vanogona kuita brunch yemwedzi miviri neshamwari dzavo dzepamwoyo pachinzvimbo.
Vazhinji vanoona vanhu vechiJuda vanopemberera Shabbat kubva pakuvira kwezuva musi weChishanu manheru kusvika pakuvira kwezuva Mugovera manheru, uko chikafu chinogadzirirwa pamberi uye vanhu vasingaite chero basa zvachose. Mhuri neshamwari vanoungana kuti vagovane kudya nemwenje, uye vatori vechikamu vanogona kutora nguva yavo vega kuverenga / kufungisisa, uye kungopedza nguva vari pamwe chete.
Iwe unogona kugadzira chero yemaitiro evhiki nevhiki anoshanda zvakanyanya kune yako munharaunda denderedzwa uye / kana kutsamira pamweya.
Vamwe vanhu vanoita kuungana kuzere uye / kana mwedzi mutsva mwedzi wega, nepo vamwe vachipemberera solstices uye equinox.
Nekudaro iwe nevadikanwi vako sarudza kupemberera, gadzira karenda yezviitiko uye kuungana uye uve nechokwadi chekunamatira pairi!
6. Regedza Kukosha Kwauri
Kana iwe wakarererwa nevabereki vaikushoropodza zvakanyanya, iwe ungangove wakaita izwi rinotyisa, rakashata remukati.
Izwi iri rinogona kukuudza kuti unoita kunge gehena paunenge uchigadzirira kubuda, kana kuseka kuedza kwako kwekugadzira, kana kushora basa rako se-sub-par.
Izvo zvakakosha zvakakosha kurwisa izwi iri nechimwe chinhu chakanyanya kunaka.
Nguva dzese apo kusagadzikana kunotanga kukwira kumusoro, fungidzira iwe pachako uchipinda uye uchidzivirira mwana wako womukati , muchivarumbidza nekuvarumbidza, nekukurudzira, uye rudo rusingaverengeki .
Iwe unozoshamisika kuti izvi zvinogona sei kutenderedza yako yese pfungwa mune pfupi pfupi nguva.
7. Kutanga A Positivity Zvinyorwa
Ichi chinhu chaunogona kuita mumubhedha mushure mekunge wadzima zvemagetsi zvehusiku.
Iwe haufanire kubhururuka pamusoro pezvese zvakanaka kunaka kwaunogona kufunga nezvazvo: izvo chaizvo hazvizove zvekushandisa zvakanyanya, kunyanya kana iri saccharine uye isina chokwadi.
Pakupera kwezuva, ingo nyora pasi chinhu chimwe chete chakanaka chakaitika zuva iri.
Kunyangwe pane yakaipisisa, inoshungurudza mazuva, pane kazhinji chinhu chakanaka chekukoshesa.
Ko chipfuwo chako chakakukwazisa nerudo uye nekufungatira pawakasvika kumba kubva kubasa? Wakaona here kuti iwe uchinge uchine mashoma eaya ice cream akasara mufiriji? Avo vanoverenga! Nyora pasi.
Kana uye kana iwe ukazviwana uchinzwa sekunge iwe wakave nekuuraya kusingaperi kwekushaya hanya kwemavhiki, iwe unogona kupfuura nemagazini iyoyo uye uone zvese zvakanaka zvinhu zvakaitika futi.
Zvinogona kuve zvakanaka kune mamwe anodikanwa-maonero kana iwe uchinzwa kubhogodzwa pasi nechena.
8. Usamborega Kudzidza
Iwe unofara sei iwe paunodzidza chimwe chinhu chitsva? Kunyanya, ndeipi nguva yekupedzisira iwe waine iyo giddy diki 'squeeee' inonakidza nekuti iwe wakazvinyudza iwe mune nyowani chirongwa kana kuedza uye unogona chaizvo kuyera kufambira mberi kwako?
ndozvitora sei zuva rimwe chete panguva
Kudzidza hunyanzvi hutsva kana mutauro, kana kutanga chirongwa icho chine zvinoyera zvibodzwa ndiyo nzira huru yeku kuwedzera kuzvivimba kwako , uku uchikupawo ruzivo rwakakosha.
Kune zvinhu zvisingaverengeki zvakasiyana zvaunogona kudzidza, zvinoenderana nekuti ndezvipi zvidzidzo zvaunofarira iwe zvakanyanya.
Iwe unofarira kushanda nemaoko ako, kunyanya pazvinhu zvekugadzira? Unogona kutora kuruka, kuveza matanda, kugadzira dehwe, kana kugadzira zvishongo, kungodoma mashoma.
Unyanzvi hwako hwekubika hwakanyanya here? Tora makirasi ekubika, kana kukwereta akasiyana mabhuku ekubika kubva kuraibhurari uye edza mitsva yekubika!
Wakagara uchida kudzidza mutauro mutsva here? Tora makirasi mumunhu kana paInternet, uye uvhure nyika nyowani dzekunzwisisa.
Iwe unozosimudzira hupenyu hwako uye unonzwa hukuru hukuru hwekubudirira pese paunosvika - uye nekupfuura - chinangwa chitsva.
Seimwe yekuwedzera 'yay' bhonasi, kudzidza zvinhu zvitsva kunobatsira kumisikidza mambure matsva nzira muhuropi hwedu, zvinova zvinotyisa pakunonoka nyaya dzepfungwa senge Alzheimer's uye Dementia. Chaizvoizvo kuhwina-kuhwina kutenderedza.
Ndeipi yeiyi kiyi tsika tsika iwe yauri kutarisira kwazvo kuisa mukuita? Ndeupi waunofunga kuti ungatambure nawo?
Une tsika dzakakosha dzako here dzekugovana? Ndokumbira utizivise muchikamu chemashoko pazasi!
Nei Kuvimbika Kwakakosha Muhupenyu (+ Sei Kuratidza Kwako)
Chii chakaitika kuna Trevor Thomas aka 'DJ Skeletor' kubva kuThe Wendy Williams Show? Aimbove radio radio anonzi anofa
Chikonzero nei WWE yakanzura Brock Lesnar vs. Bobby Lashley - Mishumo
Ndeipi mhedzisiro yezita raEdge?
'Vanga vachirwa kudaro kubva vachiri vadiki' - WWE Nhoroondo pamusoro peVatongi veRoma uye nhoroondo yeUso
WWE Nhau: Starrcade yakakosha kumhepo paWWE Network
WWE Superstar yakagumbatira kumashure kumashure kubva kuna Vince McMahon uye Triple H mushure memutambo wake wezita (Exclusive)
Kana Iwe Uchida Rusingaperi Rudo, Tarisa Kune Mumwe Munhu Anonzwa Kunzwira tsitsi Sezvaunoita Iwe
Vince Russo anoburitsa kuti sei Vanomwe vakabviswa muterevhizheni yeWCW [Exclusive]
Nei Kuwana Yako Yekusaziva-Allocentric Balance Iri Zvakakosha Zvakakosha
kuziva sei kana musikana achiziva kuti unomuda
avhareji nhamba yemasikati pamberi pehukama
mukomana ane 3 years haazive zvaari kuda
masimba uye kushomeka kwenzvimbo yekunze yekutonga
murume wangu anonyepa nezvezvinhu zvidiki